Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Gacan Kahadal Xoogan oo Kasocda Jaamacada Bahardar.
Deg Deg: Gacan Kahadal Xoogan oo Kasocda Jaamacada Bahardar.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya xiisad culus oo udhaxaysa ardayda wax kabarata jaamacada magaalada Bahardar iyo ciidamada Agaziga looyaqaano ee ku abtirsada qoomiyada Tigreega.
Sida xogta aan kuhelayno waraaq kasoo baxday kooxda TPLF ayaa qayb kamid ah ardayda jaamaca loogu sheegay in ay joojiyaan dhamaan waxbarashadii jaamaca, waxaana waraaqda lagu sheegay in cidii amarkaas qaadan wayda laga qaadi doono talaabo cad.
Hase yeeshee ardaydii cadaalad darada lagu sameeyay ayaa gaashaanka udaruuray amarkii guracnaa ee kasoo baxay kooxda TPLF, kaas oo ardaydu ay u arkeen in boosaskooda looga qaadayo arday kale oo xukuumada naas nuujin kahaysta.
Warka ayaa intaas kudaraya in ciidanka gaarka ah ee Agaziga looyaqaano ay weerar kusoo qaadeen xarunta jaamacada ee magaalada Bahardar, halkaas oo fooda ay isku dareen ardaydii iyo ciidankii wayaanaha.
Goob joogayaal kusugan magaalada Bahardar ayaa sheegaya in ay indhahooda ku arkayeen qaar kamid ah ardayda oo dhaawacyo halis ah lagaadhsiiyay iyo waliba qayb badan oo xabsiyada ladhigay, sidoo kale goob joogayaasha ayaa sheegaya in ciidankii Agazigu uu iska caabin xoogan kala kulmay afaafka hore ee Jaamacada.
Ma aha markii ugu horaysay ee ardayda Jaamacadaha iyo ciidamada wayaanuhu ay isfara saaraan, waxaana laxasuusan yahay dhowr gacan kahadal oo dhex maray ardayda joomacadaha oo loo aanaynayo in ay hormuud kayihiin kacdoonada shacabka iyo ciidanka wayaanaha ee khal khashan.